Samsung waxay ku dhawaaqeysaa natiijooyinka rikoorka rubuca hore ee 2017 | Androidsis
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa natiijooyinka rikoorka rubuca hore ee 2017
Maaddaama shirkadda weyn ee Kuuriyada Koofureed ay isu diyaarineyso inay bilawdo iibinta taleefannadeeda cusub ee casriga ah, Galaxy S8 iyo S8 Plus, in kasta oo Samsung aysan sii deyn doonin xogta rasmiga ah illaa Jimcaha, falanqeeyayaashu waxay saadaalinayaan dakhliga soo gala rubuca hore ee 2017 taasoo xaqiijin doonta Midkoodna masiibada Galaxy Note 7 iyo fadeexadaha musuqmaasuqu midna kama dhigaan shirkadda.
Saamiyada Samsung ayaa ku sii dhowaanaya rikoorkii ugu sarreeyay ka dib markii ay heleen ku dhowaad 17% tan iyo bilowgii sannadkan cusub. Sida falanqeeyayaal badani tilmaamaan, tirooyinka ayaa si gaar ah u soo jiita, iyadoo la ogyahay in madaxweynaha shirkadda, Jay Y Lee, uu ku lug leeyahay fadeexad musuqmaasuq oo uu hadda ku socdo maxkamad laaluush iyo eedeymo kale.
Awoodda Samsung inay ka gudubto duruufaha naxdinta leh sida kuwa la sheegay waxay ku tiirsan tahay ugu horreyn iyada NAND taliska suuqa xasuusta flash, iyo kororka xusuusta ee ay wadaan baahida loo qabo taleefannada casriga ah iyo server-yada.
Qiyaasaha ayaa soo jeedinaya in macaashkeedu shaqeynayo laga bilaabo Janaayo ilaa Maarso uu gaari karo 9,4 tiriliyan oo lagu guuleystay (8,44 hal bilyan oo doolar), taas oo noqon doonta faa'iidada ugu weyn ee shirkadda Kuuriyada Koofureed tan iyo seddexdii bilood ee seddexaad ee 2013. Lacagtaas gudaheeda, qeybteeda qashin jabinta oo keli ah waxay noqotay 5,8 tirilyan oo guuleysatay.
Waxaas oo dhan, falanqeeyayaashu waxay ilaaliyaan dabeecadd si saraaxad leh rajo leh ku saabsan rajada Samsung. Galaxy S8 ayaa si aad ah loo amaanay ka dib markii la soo saaray 29kii Maarso, waxaana la filayaa in iibkiisa uu ka bato kan Galaxy S7 isla markaana uu rikoor cusub u dhigo shirkadda.
“Waxaan aaminsanahay in taxanaha S8 uu hubaashi u noqon doono Samsung isla markaana ka caawin doono inuu helo saamiga suuqa. Sanadkii la soo dhaafey dhimashadii Xusuus-qorista 8. Marka labadaas arrimood way is-dheellitirayaan, ”ayuu yiri falanqeeyaha ka-hor-tagga Tom Kang.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung waxay ku dhawaaqeysaa natiijooyinka rikoorka rubuca hore ee 2017
S Health hadda waa Samsung Health waxayna ku dareysaa dhakhtarka qadka tooska ah uga shaqeeya Maraykanka